Cooking for ကျန်းမာရေး နှင့် သတင်း ဗဟုသုတ စာအုပ်စာပေ နည်းပညာ...: Psoriasis အရေပြားနာတမျိုး
Mon, Mar 25, 2013 at 7:17 PM
ကျမ ညီမလေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလလောက်က မြန်မာပြည်က ပြန်လာပြီး တုပ်ကွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပြီးနောက် အနီကွက် ၂ ကွက် လက်မောင်းမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ နောက်တပတ်ကြာတော အဖုနီလေးတွေပေါ်လာတယ်၊ ပွားလာတယ်ဆရာ အထူးသဖြင့် ချွေးထွက်ရင်။
Then we went to see Specialist at National Skin Center and she also told us that this is pityriasis rosea. She gave her "Famotidine 20mg Tab" - 14 Tab -2times daily and Betamethasone 0.05% cream to apply and arranged to see next one and half month.
အဲ့ဒိဆေးသောက်ပြီးလိမ်းစက သက်သာသလိုရှိပြီး နောက် အဖုလေးတွေက ပြန်ထွက်လာတယ်ဆရာ။ အထူးသဖြင့် လက်မောင်း၊ ပေါင်နဲ့ ဗိုက်မှာပါ။ ဒီနေ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ပြတော့ Pityriasis Lichen chronica ဆိုပြီး ရောဂါတမျိုး ပြောင်းပြောပြီး Phototherapy treatment ယူခိုင်းတယ်။ ဘာတွေဆောင်ရမယ် ဘာတွေရှောင်ရမယ်ကိုလဲ သေချာမပြောလိုက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲ cause is unknown လို့ပဲပြောပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ် ဆိုတာလဲ မသိပါဘူးဆရာ။ နောက်ထပ် ၈ ပတ် ခွာပြီး ထပ်ချိန်းပါတယ်။ ညီမလေးကတော့ အဲဒိ treatment မယူချင်ဘူးဆရာ။ တခြား side effect ဖြစ်မှာကြောက်တာရယ် အသားနေလောင်ခံရမှာစိုးတာရယ်ကြောင့်။ ဆရာဘလော့မှာလဲ အဲ့ဒိအကြောင်းမရေးထားလို့ email ကနေတဆင့် အကူအညီတောင်းရတာပါဆရာ။ သမီးတို့ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဘာလုပ်သင့်တယ် ဘာတွေ ရှောင်ရ ဆောင်ရမယ် ဘယ်လောက်ကြာမယ် စသဖြင့် အကြံလေး အမြန်ဆုံးပေးပါဆရာ။
နှင်းခူလိုလို ဆင်တယ်။ သူများကို မကူးစေဘူး။ အပေါ်ယံမှာ ခပ်ဖြူဖြူ ငွေရောင်ရှိတယ်။ ဦးရေခွံ၊ တတောင်ဆစ်၊ ဒူး၊ ခါးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ ဖြစ်လိုက်-ပျောက်လိုက်နေတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်လဲ မပြောတတ်ဘူး။ လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ အလင်းရောင်သုံးကုသနည်း ကုနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
တစ်ခုလောက် ထပ်မေးချင်လို့ပါ။ ဒီ Pityriasis rosea နဲ့ Pityriasis Lichen chronica ဆိုတာ တူပါသလား။ ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်း Phototherapy treatment ယူရင်ရော ဘယ်လို side effect တွေများရှိနိုင်ပါသလဲ။
Pityriasis Lichenoides အရေပြားနာတမျိုး
ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အတိအကျမသိပါ။ မျိုးရိုးမလိုက်ပါ။ ပျောက်ဘို့ရာလဲ ဆရာဝန်အားလုံးက သဘောတူလက်ခံထားပြီး ကုထုံးမရှိသေးပါ။
• Antibiotics (အင်တီဘိုင်အောတစ်) ပိုးသေဆး ၁ လတာပေးတာ သက်သာစေတယ်။
• Natural sunlight သဘာဝနေရောင်ကလည်း သက်သာစေတယ်။
• Special ultraviolet light lamps အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ကုတာလဲ တချို့မှာ ကောင်းစေတယ်။ Phototherapy အလင်းရောင်သုံကုသနည်းလို့ခေါ်တယ်။
• လှိုင်းအလျားမတူတဲ့ UVB ဒါမှမဟုတ် UVA အလင်းရောင်သုံးတယ်။
• Psoralens သောက်ဆေး + UVA တွဲသုံးတာလဲ လုပ်တယ်။ Photochemotherapy လို့ ခေါ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတော့ရှိမယ်။
• Methotrexate tablets ကင်ဆာအတွက်သုံးတဲ့ဆေးကိုလည်း စမ်းသုံးနိုင်တယ်။
ယာယီသဘောသာ သက်သာစေနိုင်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မရသေးရင် PUVA နည်းကိုသုံးတယ်။ ပိုမြင့်တယ်။
Psoriasis ခေါ်တဲ့ မပျောက်နိုင်တဲ့ အရေပြားရောဂါတွေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ကုသပေးတာ များတယ်။ atopic eczema, other forms of dermatitis, polymorphic light eruption, generalised itching, pityriasis lichenoides, cutaneous T cell lymphoma, lichen planus, vitiligo, disseminated granuloma annulare, morphoea စတဲ့ တခြားအရေပြားအနာတွေကိုလည်း ဒီနည်းသုံးတယ်။
Fluorescent light bulbs မီးလုံးတွေကိုသုံးတယ်။ တပါတ်မှာ ၂-၅ ကြိမ်လုပ်တယ်။ စုစုပေါင်း ၁၅-၃ဝ အကြိမ်လုပ်တယ်။ အစပိုင်းမှာ ၁ မိနစ်တောင်မကြာဘူး။ နောက်မှာ တိုးသွားစေတယ်။ မျက်စိကိုမထိစေဘဲ ရောဂါအနာရှိတာတွေကို အလင်းရောင်ပေးတယ်။ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါဆိုလဲ အကာကွယ်ထားပေးရတယ်။
PUVA treatment နည်းမှာ Psoralen ဆေးပြားကို အလင်းရောင်မပေးခင် ၂ နာရီကြိုတင်သောက်စေတယ်။ ဒါမှမဟုတ် lotion or gel ဆေးရည်သုတ်လိမ်းပေးလို့လဲရတယ်။ ဒီဆေးသုံးသူတွေက သဘာဝနေရောင်ကာကွယ်ဘို့ ၂၄ နာရီကြာ နေကာမျက်မှန်တပ်ထားရတယ်။
ဆေးကုသရက်မှန်မလာနိုင်သူ၊ ၁ဝ မိနစ်အထိအချိန်မပေးနိုင်သူ၊ နေရောင်ကြောင့် အနာကပိုဆိုးတတ်သူ၊ xeroderma pigmentosum or lupus erythematosus အရေပြားရောဂါရှိနေသူ၊ skin cancer အရေပြားကင်ဆာ ရှိနေသူ၊ ciclosporin or methotrexate ဆေးတွေသောက်နေရသူတွေက ဒီကုသနည်းနဲ့ မတိုက်ဘူး။ ဆေးကုနေစဉ်မှာ Perfumed products ရေမွှေးမသုံးသေးဘဲနေသင့်တယ်။ အချဉ်သီး၊ မုံလာဥနီ မစားဘဲရှောင်နေရမယ်။ ဆေးခန်းကသုံးတဲ့ အလှအပသုံး အရည်တွေကလွဲရင် Creams, ointments and lotions တွေကို ရှောင်ထားသင့်တယ်။ ဆံပင်တိုတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်။
• Redness and discomfort (sunburn) နေလောက်ခံထားရသလိုနေမယ်။
• Dry and itchy skin အရေပြာြးောခက်သွေ့ပြီး ယားမယ်။
• Rashes အရေပြား အနီကွက်ဖြစ်မယ်။
• Cold sores အနာတမျိုးပေါက်နိုင်တယ်။
• Blisters in areas of psoriasis ကိုယ့်အနာနေရာမှာ မီးလောင်ဖူးဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• psoralen tablets ဆေးပြားက ပျို့ချင်စေနိုင်တယ်။
• Premature skin ageing အရေပြားက ပိုပြီးရင့်အိုမယ်။
• Skin cancer အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်မလား မပြောနိုင်ဘူး။
Credit to : Dr.Tint Swe
Posted by payagyi thar at 9:18 AM